Mashiinnada Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Rakibka ah | YiZheng
Waa maxay Mashiinka Mashiinka Mashiinka Bacriminta Mashiinka Bacriminta?
Mashiinka granulation-ka laba-fur waa tiknoolajiyad cusub oo ka kooban granulation dhaqameed, taas oo si ballaaran loogu isticmaali karo quudinta, bacriminta iyo warshadaha kale. Granulation waa geedi socod muhiim ah gaar ahaan granulation budada. Ma aha oo kaliya go'aaminta cufnaanta bacriminta granular, laakiin sidoo kale waxay la xiriirtaa tayada iyo qiimaha wax soo saarka bacriminta.
Mabda'a Shaqada Mashiinka Mashiinka Bacriminta Mashiinka Bacriminta
Shaqadan pelletizing ee Mashiinka Mashiinka Mashiinka Bacriminta Xakamaynta Gawaarida waxaa si weyn kor ugu qaadey xaalada gaarka ah ee farsamada socodka iyo qaab dhismeedka gudaha aaga soo-baxa. Ugu horreyntii, iyadoo la rogayo gadaal wareejinta labalaabka, qalabka ku jira aagga loo yaqaan 'extrusion area' oo leh soo noqnoqosho xawaare sare leh oo xoqid xoog leh iyo xiirasho joogta ah si loo kordhiyo suurtagalnimada isdhexgalka mideynta qalabka. Marka labaad, maaddooyinka isku dhaca isku xoqaya iyo xoqida aagga extrusion, waxay ka dhigayaan cadaadiska extrusion inuu kordho oo uu xasillooni ku yeesho xaalad cadaadis sare leh. Heerkulka qaybta cadaadiska sare ee extrusion-ka ayaa kor ugu kici kara 75 ℃ si deg deg ah. Dhinaca kale, cadaadiska maaddada iyo heerkulka ayaa si buuxda u buuxiya shuruudaha kala-soocidda. Dhinaca kale, saamaynta xoogan ee isku mid ahaanta waxay bedeshay qaab dhismeedka mekulka ee qalabka, sidaa darteed waxay si weyn u wanaajinaysaa tayada iyo xoogga granules iyadoo loo marayo wareejinta kuleylka iyo cadaadiska sare ee soo baxa si loo helo alaabada bacriminta ee tayada sare leh.
Faa'iidooyinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Bacriminta ee mataanaha ah
(1) Waxqabadka lagu kalsoonaan karo iyo heerka granulating sare, xoog granule wanaagsan iyo cufnaanta bulk sare
(2) La qabsiga ballaaran ee alaabta ceeriin.
(3) Saamayn halaag ah kuma yeelanayso halabuurka maadada oo leh heer kul hooseeya.
(4) Kala-soociddu waxay ku dhammaatay cadaadis, looma baahna wax isku xira, waxay ballan qaadi kartaa daahirsanaanta sheyga.
(5) granulator wuxuu leeyahay qaab dhismeed is haysta, u fudud dayactirka iyo hagaajinta
(6) Qaybaha wadida gawaarida waaweyn waxay ka samaysan yihiin waxyaabo daawayaal tayo sare leh leh, bir bir ah, titanium, chromium iwm, kuwaas oo cadeyn kara abrasion, wasakhda-caddeyn, heerkul sare leh, oo leh adeeg nolol dheer.
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Bacriminta Qalabka Mashiinka Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka
Xulashada Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Isugeynta Guud (L × W × H)
Hore: Qalabka Flat-die Extrusion granulator
Xiga: Maaddada Bacriminta ee Semi-qoyan Semi-qoyan Adoo Isticmaalaya Burbur
Hordhac Waa Maxay Soo Ururiyaha Boorka Duufaanta? Uruuriyaha Boorka Duufaanta waa nooc ka mid ah qalabka ka saarista boodhka. Aruuriyaha boodhku wuxuu leeyahay karti ururin sare si uu ugu boodbo culeys gaar ah oo gaar ah iyo walxaha qaro weyn. Marka loo eego isku-uruurinta boodhka, dhumucda qurubyada boodhka ayaa loo isticmaali karaa sidii boodhka aasaasiga ah ...